Shina kalitao vita amin'ny vy tsy misy tohotra vy fanendasana vilany fandrahoana vy sy fananganana | SANXIA
Enamel tsy misy kalitao avo lenta vy fanendasana vilany steak
Famaritana:Φ260 * 38mm
lanja:3.5kg eo ho eo
loko:Manga, volomboasary, mavo, mena, sns, loko isan-karazany hisafidianana
Avelao ianao hankafy legioma sy barbecue mahasalama sy matsiro, akoho na trondro, ary mankafy ny tsiro barbecue mahazatra mandritra ny taona.
Ny fitaovana vy dia afaka mizara sy mitazona hafanana amin'ny fomba mahomby, ka mahandro tsara ny lapoaly rehetra. Ity takelaka steak ity dia misy fonosana enamel malama, izay afaka mamadika mora foana ireo akora ao anaty vilany, tsy mora miraikitra amin'ny faran'ny vilany. Ny fisehoan'ny sakafo dia miharihary fa vaovao sy malefaka kokoa, ary ny tsiro dia mety hahatratra ny fanjakana tonga lafatra tianao.
Ny vilany iray manontolo dia vita amin'ny vy avo lenta. Izy io dia mandray teknolojia fandefasana disa mandroso. Ny sofina vilany sy ny tahony dia mifandray amin'ny vatan'ny vilany, izay mateza sy mateza. Ny vera vita amin'ny enamel eo ambonin'ny vilany dia voafantina tsara ihany koa amin'ilay vera enamel malaza eran-tany. Sady manana loko tsara tarehy izy io ary mahatonga ny toe-tsaina mahandro ho tsara tarehy toy ny andro main-tany, fa manana talenta maro koa, toy ny fiarovana ny vilany tsy ho harafesina, hahatonga ireo akora mandry eo ambonin'ny vilany ho malama ary tsy mora hifikitra amin'ny vilany. Mamirapiratra enamel tsara, tsy matahotra ny mari-pana ambony, miaraka amin'ny afo koa tsy mila miahiahy momba ny fandokoana, milatsaka.
Ny tampon-tendrontany dia noforonina tao anaty vilany, ary ny tampon'ny fandrahoan-tsambo dia ampiasaina amin'ny lohan'ny fatana mahazatra, izay afaka misoroka ny menaka be loatra tsy mamela sakafo. Tena mety amin'ny akoho barbecue, steak ary legioma. Ampiio marika marbecue milahatra amin'ny sakafonao koa mba ho tsara tarehy sy mahavelom-bolo kokoa.
Ny tsiranoka mitete dia natao manokana amin'ny andaniny roa amin'ny vilany, izay mety amin'ny fanariana menaka sy tavy be loatra. Ny fahandroana menaka kely kokoa dia mahasalama kokoa ny sakafo.
Ity lovia fanaovan-tsakafo tsy mitongilana ity dia mety amin'ny fomba fanafanana rehetra. Mety amin'ny entona, fahandro fampidirana, seramika vita amin'ny vera ary tampon'ny fatana elektrika. Tano maloto ary mora diovina. Ankafizo ny fomba fandrahoan-tsakafo lozisialy miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Teo aloha: Lafaoro vy mahomby sy matsiro enamel
Manaraka: Milk Pot Cast Iron Enamel Casserole Non-Stick Frying Pan Baby Frying Pan Baby Sakafo Famonoana Hot Milk Noodle Pot
nantsoina hoe Skillets Iron Cast, Cast Iron Skillet, ncoated Cast Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, xtreme Iron Skillet, namel Skillet,